गरिबका नाममा २९ अर्ब, तर खोई परिणाम ?::अनुसन्धान अनलाइन डटकम
झापा । महोत्तरीको औरही नगरपालिकाको औरही बजार नजिकै एउटा ठूलो बस्ती छ– मुसहर बस्ती । त्यहाँ करिव ६५ परिवारको बसोबास छ ।
रविताको घर भनेकै त्रिपालको पाली हो । उनको परिवार परालमा सुत्छन् र थोत्रो एकसरो ब्ल्याङ्केट ओडेर जिउ बचाउने प्रयास गर्छन् । हेर्दा त्यो घर नभएर बिरालोको गुँडजस्तो लाग्थ्यो । उनीहरुसँग अन्नको भण्डार पनि थिएन । उनको श्रीमान अरुको खेतमा गएर छाक टार्ने अन्न जुटाउने प्रयासमा हुन्छन् । अन्न जुटेन भने भोकै समय कटाउँछन् ।
पानी परेको दिन उनका श्रीमानले त्रिपाल तर्काउँछन् र रविताले सन्तानलाई झरीबाट बचाउन प्रयास गर्छिन् । आफूहरु रुझेर रात बिताउँछन् । सानो जग्गामा उनको फुसको घर त थियो तर, जनता आवास कार्यक्रम आएर घर भत्काइदियो, बनाउन आएन । उनको बस्तीमा २० घर बाहेक कसैको घरका छाना छैनन् र प्रायःको अवस्था रविताको भन्दा फरक छैन ।
बडीमालिका नगरपालिका बाजुराका कृष्ण चदारा शारीरिकरुपमा अपाङ्ग छन् । उनीसँग भएका जमिनले तीन महिना पनि खान पुग्दैनथ्यो । गिटी कुटेरै भए पनि आफ्नो चारजनाको परिवारको गुजरा चलाइरहेका थिए । त्यहीबेला उनको गाउँमा गरिवी निवारण कोष पस्यो । उनीसहित ३३ परिवारको एउटा सामाजिक संस्था बन्यो । र, उनले पनि अरुले जस्तै १३ हजार पाँच सय रुपैयाँ बिउ पुँजीका रुपमा ग्रहण गरे । अब त्यो रकम के गर्ने ? न कुनै सुझाव दिइयो न, त कुनै तालिम नै ।
कृष्णले आफूले सक्ने गरे– किराना पसल । अब खाने इलम गर्न जाने कि किराना पसल ढुकेर बस्ने ? तीन महिनापछि उनको किराना पसल गायब भयो । अब त्यो ऋण तिर्ने उनीसँग ल्याकत रहेन । कृष्ण भन्छन्, ‘गरिवी उन्मूलन गर्न आएको गरिवी निवारण कोषले त झन् ऋणी पो बनाएर गयो ।’
कृष्ण मात्र होइन, उक्त रकम अरु कसैले पनि फिर्ता गरेका छैनन् । उद्यमी बनेर कसैको जीवनस्तर कायापलट पनि भएको छैन । बरु ऋणमा डुबेका छन् । बसन्त विश्वकर्मा पनि बडिमालिका नगरपालिकाको एउटा सामाजिक संस्थाका सचिव थिए । उनले, पनि बिउ पुँजी लिएर बाख्रा किने । तर, उनको परिवारसँग कुनै व्यवसायिक आइडिया भएन । त्यसैले, बाख्रा पालनलाई ठूलो रुप दिन सकेनन् ।
दुई वर्षपछि खोर बनाउने परियोजना भनेर अर्को १० हजार रुपैयाँ आयो । बसन्त भन्छन्, ‘खोर बनाउन परियोजना आउँदासम्म बाख्रा नै सकिइसकेका थिए । तलिम त परको कुरा भयो ।’ त्यसपछि भने गरिवी निवारण कोष बिलायो ।
त्यतिमात्र होइन, कोषले समुदायमा परिचालन भएको ६७ वटा सामुदायिक संस्थाले २८ लाख २८ हजार ४४३ रुपैयाँ कोषमा थप गरेको उल्लेख छ । बसन्त विश्वकर्माले भने, ‘अहिले गरिबी निवारणको कुनै पनि सामुदायिक संस्थामा कुनै पनि फन्ड छैन ।’ नेपाल सरकारको निकाय गरिबी निवारण कोषका केही दृष्टान्तहरु हुन् यी ।
धन्न कम्युनिस्ट सरकारकै बेला गरिवी निवारण कोष खारेज हुनबाट जोगियो र नेकपा नेता निर्मल भट्टराई राजनीतिक नियुक्त लिएर उपाध्यक्षको कुर्सीमा पुगे । ‘छ महिनामै कोष खारेज हुनेवाला थियो’, उपाध्यक्ष भट्टराई सुनाउँछन्, ‘कम्युनिस्टले सबैभन्दा पहिले गरिवलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री (ओली) सहमत भएपछि कोमामा गएको कोषले पुनर्जीवन पाएको हो ।’
दुई वर्षदेखि बजेटको खडेरी लागे पनि विगत १५ वर्षसम्म भने गरिवी निवारण कोष हराभरा थियो । कोषले आव ०६०÷६१ देखि ०७५र७६ सम्म २८ अर्ब ३२ करोड ७४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ वल्र्ड बैँकबाट निकासा लिएको थियो । सो अवधिमा नेपाल सरकारले ७२ करोड बराबरको लगानी गरेको गरिवी निवारण कोषको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
तत्कालीन राजाले संसद र स्थानीय तह भङ्ग गरेको अवस्थामा ०६० सालमा गरिवी निवारण कोषको उदय भएको थियो । अध्यादेशमार्फत स्थापना भएको कोषको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने र उपाध्यक्षसहित विकास विषयका व्यवसायिक व्यक्तिहरुमध्येबाट सरकारले पाँच जना सदस्य नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
२०६३ मा बनेको पुनस्थापित संसदले ऐन नै जारी गर्यो । विश्व बैँकले भने ०६० सालबाटै निसर्त अनुदान दिन थालेको थियो । र, यसले विभिन्न जिल्लाहरु छनोट गर्दै गरिबमाथि लगानी गर्न शुरु गर्यो । उक्त ऐनले लिएका उद्देश्यहरु यस्ता थिए–
–सामाजिक परिचालनका माध्यमबाट गरिब व्यक्ति, परिवार वा समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक स्तर उठाउन उनीहरुलाई आवश्यक सेवा सुविधामा पहुँच सुनिश्चित गने ।
–स्थानीय विकास कोषको निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय गराई आफ्नो हक हित र अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने गरी सक्षम बनाउन क्षमता अभिवृद्धि गराउने ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको जनसांखिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०७५÷७६ अनुसार १८ दशमलव ७ प्रतिशत नेपाली निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनि रहेको देखाएको छ ।
०७२÷०७३ मा नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २१ दशमलव ६ प्रतिशत थियो । आव ०७४÷०७५ मा यो घटेर १८ दशमलव ७ प्रतिशतमा झरेको हो । यो संख्यालाई वि.सं २०८७ सम्म ४.९ प्रतिशतमा ल्याई विसं. २१०० सम्म देशबाट गरिवीको अन्त्य गरिने सरकारको योजना रहेको बताइएको छ ।
विश्व बैँकका अनुसार दैनिक एक डलरभन्दा कम आय हुने स्थितिलाई अति गरिबी र दुई डलरभन्दा कम आय हुने स्थितिलाई गरिवी भनिएको छ । यसलाई मान्दा ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डिकेटर (एचडीआइ) को विश्व सूचीमा नेपाल अहिले १४७ औँ स्थानमा छ ।
हालै राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको कार्यदलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा कोभिड महामारीले नेपालमा १५ लाख ६७ हजारले रोजगारी गुमाएको र १२ लाख गरिव थपिएको उल्लेख छ । नेपाल डेमोग्राफिक हेल्थ सर्भिस २०१६ ले नै नेपालका ४६ लाख मानिस खाद्य अपर्याप्तताको चपेटामा रहेको देखाएको थियो । त्यसमध्ये १० प्रतिशत भोकमरीको चरम संकटमा थिए ।
बजेट हुँदासम्म गरिवी निवारण कोष भ्रष्टाचारको अखडाका रुपमा विकास भयो । महालेखा परीक्षणको ५६ औँ प्रतिवेदनले पनि पूर्वाधार निर्माणमा कोषका तत्कालीन पदाधिकारीहरुले अनियमितता भएको औँल्याएको छ ।
कोषबाट पूर्वाधार निर्माण गर्न ०७४÷७५ सम्म ३९८ निर्माण आयोजनासँग ५२ करोड ३३ लाखमा खरिद सम्झौतामा ३९ करोड ३४ लाख भुक्तानी दिए पनि आयोजनाको निर्माणकार्य सम्पन्न नहुँदै कोषका कार्यक्रमको अवधि समाप्त भएको हुँदा त्यस्ता आयोजना अधुरै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । निरन्तर भ्रष्टाचारजन्य उजुरी आएपछि ७ कात्तिक ०७५ मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका लेखा उपसचिव यामप्रसाद भुसालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो ।
अहिलेसम्म गरिवी निवारण कोषले सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा घुम्ती कोषमार्फत ३ अर्ब ५३ करोड ९८ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा १ अर्ब ९२ करोड ५९ लाख ७१ हजार लगानी गरेको देखिन्छ । प्रदेश १ मा १ अर्ब १० करोड ९४ लाख ७९ हजार र प्रदेश २ मा ३ अर्ब ५३ करोड ९८ हजार रुपैयाँ कोषले लगानी गरेको छ । वागमती प्रदेशमा १ अर्ब ४८ करोड ६७ लाख २३ हजार लगानी गरेको कोषको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा २८ करोड २२ लाख ७७ हजार, प्रदेश ५ मा १ अर्ब ७० करोड २९ लाख ४२ हजार र कर्णाली प्रदेशमा १ अर्व ९२ करोड ५९ लाख ७१ हजार लगानी भएको कोषले बताएको छ । गरिबी निवारण कोषले १० देखि ११ अर्ब रुपैयाँ भने प्रशासनिक काममै खर्च गरेको देखिन्छ ।
कोष र विश्व बैँकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आइडा) बीच १४ सेप्टेम्बर २००४ मा करिब एक अर्ब १२ करोड रुपैयाँको अनुदान सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि ९ मार्च २००७ मा करिब एक अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको अनुदान थपियो ।
३१ जनवरी २००८ मा एकैपटक करिब सात अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको अनुदान सम्झौता भएको थियो । त्यही वर्षको ८ मे २००८ मा नेपाल सरकार र राष्ट्रसंघीय निकाय आइफाडबीच ३० करोड ६४ लाख रुपैयाँको सम्झौता भयो ।
कोषको तथ्याङ्कअनुसार आइडीएबाट निकासा भएको २७ अर्व १० करोड १७ लाख ५३ हजारमध्ये ९० प्रतिशत खर्च भएको, आइफाडबाट निकासा भएको २२ करोड ४९ लाख ५८ हजारमध्ये जम्मा ४२ प्रतिशत खर्च भएको देखाउँछ । त्यस्तै, जेएसडीएफबाट निकासा भएको २७ करोड ७१ लाख ३८ हजारमध्ये ९९ दशमलव ७२ प्रतिशत रकम खर्च भएको कोषको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले नै ‘गरिबी न्यूनीकरण’ राखी सरकार, दातृ निकाय, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट गरिबका नाममा वर्षेनी खर्च भएको करोडौँ रुपैयाँ वास्तविक गरिवको घर आँगनमा पुग्न नसकेको स्वीकार गरेको छ ।
उसो त अर्थशास्त्री केशव आचार्यले गैरसरकारी संस्थाले सरकारसँग मिलेर गरेको काम प्रभावकारी हुन नसकेका कारण फजुल खर्च भएको बताउँछन् । अर्थशास्त्री आचार्यले भने, ‘अनुदानमा आएको ८० प्रतिशत बजेट त ओभरहेड कस्ट नै हुन्छ, लाभग्राहीसम्म पुग्ने भनेको जम्मा २० प्रतिशत मात्र हो ।’ कोट टाइ लगाएर गाडीमा पुगेका कर्मचारीको भाषा नै गरिवले नबुझ्ने उनी बताउँछन् ।